Ukuphindaphinda iitafile Discover Discover Discover Online Discover ➡️
TUthetha ngokuphindaphinda. Ku nokuba njalo funda lula kunokuba ucinga. Yonke into ingumbandela wokubazi, ukuphindaphinda kunye nokukhumbula ngentloko kwaye baya kuhlala kunye nawe ubomi bakho bonke. Ziphose kuyo!
Impazamo: umbono awunakubakho yehla
La Ukuphindaphinda kwetafile Yinto oya kuyisebenzisa amaxesha amaninzi ebomini bakho. Awusoze ulibale ukuba ufunda usemncinci. Ukuba siphinda phinda nganye yeetafile, ngeeyure ezimbalwa kakhulu uya kuba nakho ukuqinisekisa ukuba sele uwazi onke amanani ukuphindaphinda.
Ngaba ufunda iitafile? Sincoma inqaku lethu: indlela yokufunda iitheyibhile zokuphindaphinda. Khumbula ukuba Ukuphindaphinda iitafile ukusuka kwi-1 ukuya kwi-10 zibalulekile kwimathematika. Ukuba awuyazi kakuhle ngokukhawuleza, uya kuba neengxaki kwixesha elizayo xa kuziwa ekwenzeni izibalo ezilula. Kodwa musa ukoyika! Siyakuqinisekisa ukuba kulula kunokuba ucinga. Njengomzekelo, inika umdla into yokuba uqonde ukuba u-3 x 4 ngu-12. Oku kuthetha ukuba u-3 uyaphinda-phinda ama-4, singathi u-4 uyaphinda-phindwa kane, kuyafana.
Nangona inomdla Qonda ukuba uphinda-phindo usebenza njaniKubomi bakho buqu, iya kuba yimemori yakho eya kucengceleza isiphumo sokuphindaphinda nganye kwangoko.
1 Ukuphindaphinda iitafile ukusuka kwi-1 ukuya kwi-10
2 Zithini iitafile zokuphindaphinda?
2.1 Zeziphi izibonelelo eziziswe yile tafile?
3 Uzifunda njani iitafile zokuphindaphinda?
4 1 Itheyibhile
5 2 Itheyibhile
6 3 Itheyibhile
7 4 Itheyibhile
8 5 Itheyibhile
9 6 Itheyibhile
10 7 Itheyibhile
11 8 Itheyibhile
12 9 Itheyibhile
13 10 Itheyibhile
Ukuphindaphinda iitafile ukusuka kwi-1 ukuya kwi-10
Las Ukuphindaphinda iitafile kubalulekile, ebomini bethu bonke siza kufumana iimeko apho kufuneka sizazi kwaye siziphathe kakuhle ngokukhululeka okukhulu. Ezona meko zixhaphakileyo apho sinokuzifumana kunokuba:
• Ukuthenga amatikiti ali-10 Umnyhadala wosapho lwakho lonke kwaye kufuneka ulazi ngokukhawuleza ixabiso lazo zonke. Enye into enokwenzeka kukudibanisa onke amagalelo nganye nganye, kwaye elinye ithuba elinokubakho kukusebenzisa la Itafile e-10 Ingasinika isisombululo kwangoko.
• Enye imeko inokuba kukwazi yimalini ipetroli esiza kuyidinga ukufika kwindawo, ukuba siyayazi into echitha imoto yethu zonke iikhilomitha ezi-5. Kule meko sinokusebenzisa la Itafile e-5 njengeyona ndlela ilungileyo.
• bazi zingaphi izinto ezikwiibhokisi ezininzi ukuba siyazi ukuba zingaphi iiyunithi kwenye nganye.
• Yazi ixabiso elipheleleyo lebhetshi yezinto ukuba siyazi ukuba ixabisa malini.
• Lazi ixabiso lama-dozen amaqanda ukuba siyazi ukuba leliphi elinye lawo.
• Ukuba unenkampani kwaye unabasebenzi abangama-2000 apho bonke bazakufumana umvuzo ofanayo, ukuphindaphinda okulula kunokukunceda ukuba wazi ukuba yimalini ekufuneka uyihlawule kubo bonke abasebenzi bakho kwinkampani yakho. Zi imisebenzi eqhelekileyo.
Kuko konke oku nangaphezulu kubalulekile ukuba wazi ngokugqibeleleyo itheyibhile yokuphindaphindaKwakhona, kulungile ukuba wazi izibonelelo zokufunda ngetafile yokuphindaphinda. Njengoko sibona, iimeko apho siya khona kufuneka itafile yokuphindaphinda iqhelekile kwaye iyahluka, yiyo loo nto ukubazi kakuhle kwaye nokubazi nzulu kuphantse kube luxanduva ebomini bethu.
Zithini iitafile zokuphindaphinda?
Ukuyilwa kwe ukuphindaphinda iitafile kubangelwa sisithandi sobulumko kunye nesazi sezibalo IPythagoras. Ngobukrelekrele obuninzi, wakwazi ukuyibona ngamehlo le misebenzi yezibalo, nangona kamva yaba sisikolo sasePythagorean esabenza bagqibelela.
Itafile zokuphindaphinda babe ngexesha labo inguquko yokwenene, kuba enkosi kubo imisebenzi emikhulu yemathematika ingenziwa ngaphandle kokudibanisa amanani amaninzi amaxesha amaninzi.
Kwiminyaka emininzi, zonke iintlobo zeetafile kunye neendlela ezilandelelweyo zacwangciswa, ezinye iitafile zazingamanani ama-3 ukusuka ku-0 ukuya ku-999, kodwa azibanga nampumelelo kwiitafile ezisisiseko 0 ukuya ku-10.
1642 UBlaise Pascal wasungula isixhobo sokubala esizenzekelayo eyayiyirubrikhi yale misebenzi yezibalo.
Itafile yokuqala yokuphindaphinda, ibandakanya itafile yeCartesian (okanye Itafile yasePythagorean equka ukudibanisa ibhokisi nganye nenye.
Zeziphi izibonelelo eziziswe yile tafile?
• Abarhwebi banokwenza imisebenzi yabo yokuthenga nokuthengisa ngokukhawuleza okukhulu.
• Abezomnotho kunye nabaqokeleli berhafu belo xesha ngoku banokwenza imisebenzi emikhulu ngexesha elifutshane.
• Abemi banokwenza imisebenzi entsonkothileyo ngaphambili eyayithatha ixesha elide.
Njengoko sibona, imathematics kwaye ngakumbi iitafile zokuphindaphinda, Ekuqaleni sele beqalisile ukuvelisa eyabo yokuqala izibonelelo kuluntu. Ngelo xesha, ukuba nezixhobo eziluncedo yayisisipho sokwenene esasiziselwa yinzululwazi. Kule mihla, ayinakucingelwa ukuba ungaphila ngaphandle kokuphindaphinda iitafile, kuba izigidi zemisebenzi zenziwa mihla le apho kufuneka khona ezi tafile.
Uzifunda njani iitafile zokuphindaphinda?
Unokubazi konke ngeyure e-1!. Ukuba uyazibuza indlela yokufunda iitheyibhile zokuphindaphinda, sineendaba ezimnandi, Kulula kakhulu ngobuqhetseba ! Ingqondo inayo Iindidi ezimbini zememori: elifutshane kunye nexesha elide, Eli qhinga liya kukuvumela ukuba ufunde ngokukhawuleza okukhulu kwaye liya kuhlala ngonaphakade. Siza kulandela la manyathelo aya kwenza ukuba iitafile zibe lula kakhulu.
• Isinyathelo sokuqala. Masithathe umzekelo umzekelo Amaxesha ama-7 etafile. Kwaye siza kuyifunda yonke kube kanye. Ungakhathazeki ukuba awuyikhumbuli yonke into, ekuqaleni oku kuqhelekile, masikufunde.
• Inqanaba lesibini. Siza kugquma zonke izisombululo ngephepha, ngaphandle kokugubungela ukuphindaphinda, sigubungela izisombululo ezinje:
• Isinyathelo sesithathu. Siza kuqala ekuqaleni kwaye siza kuzama ukwazi ukuba ingakanani i-7 × 1, sithi isiphumo ngokuvakalayo kwaye ulithobe iphepha ukulijonga, ukuba uphumelele, qhubeka nokuphinda-phinda okungama-7 × 2, ukuba akuphumelelanga kufuneka ugubungele Zonke izisombululo kunye nokubuyela ekuqaleni.
• Isinyathelo sesine. Ukuba ubethe i-7 × 2, emva koko uqhubeke ukuthoba iphepha ngalinye de kube sekupheleni, ukuba uyaphoswa kuya kufuneka uphinde uwagqibe onke kwaye uqale kwasekuqaleni. Kwaye ke ngazo zonke iitafile.
Le nkqubo isebenzisa imemori yakho ukwandisa ingqalelo. Ngale ndlela, ingqondo yakho iya kwenza konke okusemandleni ayo ukwazi itafile yokuphindaphinda ukuze ingabinakuqala kwasekuqaleni kwitafile nganye. Kungenxa yoko le nto le nkqubo yenye yezo sijonga ukuba zisebenza ngokufanelekileyo. Ngelo xesha linye siza kuphinda-phinda iitafile kwakhona, ke isifundo siya kugqitywa ngakumbi.
Imemori yexesha elide yenye yezona zisebenzayo. Oko kuveliswa yile mthambo kukuba ingqondo yakho ijonge kakhulu, kuba iyazi ukuba ukuba uyasilela kuya kufuneka ubuyele ekuqaleni kwakhona. Oku kufuneka ukwenze ngeetafile zokuphindaphinda ezili-10, kwaye ukuphinda indlela kaninzi Siqinisekisa ukuba ngeyure e-1 uya kubazi bonke!
Iinkcukacha ezinomdla malunga ukuphindaphinda iitafile :
• Ukuphindaphinda iitafile yimisebenzi elula yezibalo equka ukongeza amanani amaxesha amaninzi, umzekelo 7 × 3 = 21 (oku kuthetha ukuba 7 + 7 + 7 = 21). Yimisebenzi elula kakhulu kodwa kwangaxeshanye ibaluleke kakhulu ebomini, kuba uya kuyisebenzisa kakhulu.
• Ukubaluleka kokwazi iitafile zokuphindaphinda kubalulekile, eminye yemizekelo yokusetyenziswa ingaba yile: ukuba ilamuni ixabisa iidola ezi-5 kwaye ndithenga iilamuni ezi-4, zizakuxabisa malini kum zonke ezi zinto? Ngomsebenzi wemathematika u-5 x 4 = 20, siyazi ukuba iidola ezi-5 x 4 iilamula ziidola ezingama-20. Uya kuyenza le nto yokusebenza kwemathematika amawaka amaxesha ebomini bakho bonke.
• Kufuneka siziqonde kakuhle. Kubalulekile ukubazi kakuhle kakhulu ukuze babenakho ukuba nesisombululo sokuphindaphinda ngalunye kwangoko, oku kuyasivumela ukuba songe ixesha elininzi kunye nezibalo ezinxulumene noko.
• Kukho amaqhinga amaninzi ukwazi iitafile zokuphindaphinda, sicebisa inqaku indlela yokufunda iitheyibhile zokuphindaphinda, kodwa sikwachaza ezinye iinkcukacha, umzekelo: ukuba siyazi ukuba zingaphi i-3 × 4 = 12, siza kwazi nokuba ingakanani i-4 × 3 = 12, khumbula ukuba i-odolo ayisichaphazeli isisombululo, ngale ndlela u-7 × 3 = 21 no-3 × 7 = 21. Eli qhinga liyakunceda ulisebenzise kwimisebenzi emininzi.
• Eyona ndlela isebenzayo kunye neyona isebenzayo yokufunda iitheyibhile zokuphindaphinda, ibandakanya ukuphindaphinda itafile nganye kaninzi, oku kuyakwenza ukuba ubakhumbule ngokulula nangobomi bonke.
Ngoku ukuba uyazi iitafile, ixesha lifikile bafunde ubomi bakho bonke, kule webhusayithi sikunika amaqhinga okukhumbula anokukunceda ungaze ulibale kwaye uphendule ngokukhawuleza ngalo lonke ixesha ufuna.
Recuerda que ukungaguquguquki sisitshixo sempumelelo, nangona zisenokubonakala zinzima, Ukuphindaphinda iitafile kufuna ixesha elincinci kakhulu lokufunda ngonaphakade, yinto yokuphindaphinda nokuphindaphinda nganye nganye, siqinisekile ukuba ngenjikalanga enye uya kuba nakho ukufikelela kwinqanaba lokuba zibhalwe kwimemori yakho ubomi bakho bonke.